सात महिने शिशु नै संक्रमित भएपछि… – Naya Kura Daily
सात महिने शिशु नै संक्रमित भएपछि…
August 20, 2020 80
प्रश्न– तपाईंको नाम ?
प्रतिप्रश्न– नाम नै त किन भन्नुपर्‍यो र ?
अनि, काम नि ?
म स्वास्थ्य क्षेत्रमा छु । सरकारी सेवामा काम गर्छ भनिदिनु न । डिटेल भनेपछि फेरि गाह्रो पर्छ ।
भनेपछि, तपाईंको परिवारलाई समाजले खुब दुःख दिइरहेको कि क्या हो ?
समाजमा बाँच्न धेरै गाह्रो छ । संक्रमितलाई समाजले निरुत्साहित गर्छ ।
फोनमा जो कुरा गरिरहेका छन्, उनी कोरोना संक्रमित होइनन् । उनीबाहेक अरु सबै परिवारका सदस्यमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । संक्रमित हुनेमा उनका सात वर्षीय छोरा पनि थिए ।
तर, राधेश साह (नाम परिवर्तन) गत १९ साउनदेखि घरबाहिर निस्किएका छैनन् ।
वीरगञ्जलाई कोरोनाले आक्रान्त पारेपछि लकडाउनलगत्तै काठमाडौं छाडेका राधेशको परिवार १७ साउनमा पुनः काठमाडौं फिरेको थियो । राधेशलाई भने अस्पतालको नियमित ड्युटीले परिवारसँग वीरगञ्ज जान छेकेको थियो । वीरगञ्ज–१४ का राधेशको घर भक्तपुरको कौशलटारमा पनि छ ।
परिवारसँग भेट भएको दिन राधेशको घरमा खुशी छाएन । किनभने, काठमाडौं आएकै साँझ उनका सात महिने छोरामा ज्वरो देखियो । शरीरको तापक्रम बढेर ९९ डिग्री फरेनहाइट पुग्यो ।
अर्को तनावको विषय थियो ५५ वर्षीया आमा र ६० वर्षीया बुबामा झन् ज्वरोसँगै रुघाखोकी पनि थियो ।
संक्रमित क्षेत्रबाट आएकाहरुमा यस्तो लक्षण देखिएपछि राधेश दम्पत्ति अत्तालिए । कतै कोरोनाले आक्रमण त गरेन ?
अर्को दिन पाटन पुगेर राधेशका पाँचजनै परिवारले नै पीसीआर परीक्षण गरिहाले । प्रोटोकल मिलेका कारण पनि उनीहरुलाई परीक्षणमा कुनै अप्ठ्यारो परेन । अरुलाई जस्तो परीक्षणको रिपोर्टका लागि लामो प्रतिक्षा गर्नु पनि परेन । अर्को दिन नै पीसीआर रिपोर्ट राधेशको हात लाग्यो ।
तर, त्यो रिपोर्ट राधेशको परिवारका लागि डरलाग्दो थियो । ‘मबाहेक सबैको रिपोर्ट कोरोना पोजेटिभ आयो’, राधेशले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यता मेरो परिवारलाई कोरोना संक्रमण भयो, उता समाजमा एक/दुई दिनमै हल्लीखल्ली भइहाल्यो । मानिसहरुले के के न हो कि जसरी प्रचार गर्न थाले । कतिले गाली नै दिए ।’
यता राधेशलाई अर्कै आपत थियो, संक्रमितलाई हस्पिटल लैजाने कि घरमै राख्ने ? फेरि हस्पिटलमा पुगेपछि सात महिनाको बच्चालाई कस्तो स्याहार होला ? के खाला ?
राधेशले निर्णय गरे – होइन ! घरमै राख्नुपर्छ । यो निर्णयमा उनकी पत्नी पनि राजी भइन् । राधेशकी पत्नी पनि स्वास्थ्यकर्मी नै हुन् । तर, शिशु जन्मिएपछि उनी काम छोडेर बच्चाको स्याहारमा लागेकी थिइन् ।
त्यसपछि सुरु भयो राधेशको परिवारको फरक दैनिकी ।
राधेश ड्युटी जान छाडेर घरकै संक्रमितको स्याहारमा खटिन थाले । उनी पत्नी बसेकै फ्लोरमा बस्थे । आमा–बा एउटा र पत्नी र छोरा अर्को कोठामा बसेर कोरोनासँग लड्न थाले ।
उनीहरुका लागि खाना बनाउनेदेखि रोगसँग लड्नका लागि प्रोत्साहन दिनेसम्मको जिम्मेवारी राधेशको टाउकोमा थियो । उनी भन्छन्, ‘हामी यसको जटिलता थाहा भएकाले अलिकति डराएका पनि थियौँ । तर, पारिवारिक पृष्ठभूमि नै स्वास्थ्य भएकाले व्यवहारिकरुपमा अलि सहज भयो ।’
राधेशले सात महिनाको शिशुका लागि बेला–बेला लिटो बनाएर झ्यालबाट दिन्थे । काखे बालक भएकाले स्तनपान त गर्नु नै पर्थ्यो । राधेशले भने, ‘बाबुलाई एक/दुई दिनबाहेक लामो ज्वरो आएन ।’
केही समस्या पर्‍यो कि राधेशकी पत्नीले एसएमएस गरिहाल्थिन् । राधेशले सेवा दिइहाल्थे ।
उनलाई चारजना संक्रमितको स्याहार गर्न त्यति सहज थिएन । त्यसभन्दा झन ठूलो त मनमा शंकाले डेरा जमाएको थियो – अरु त बलियै छन् । तर, सात महिनाको बच्चालाई गाह्रो त हुँदैन ?
१४ दिनपछि गरेको पुनः पीसीआर परिक्षणले भने उनीहरुको सबै डर भगाइदियो । उक्त रिपोर्टमा सात महिने शिशुको मात्र नभएर परिवारका अरु सबै सदस्यको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ देखियो ।
सात महिने शिशुले कोरोना जितेको खबरले राधेश दम्पत्ति छोरो जन्मेका बेलाभन्दा बढी खुशी भए । राधेश सुनाउँछन्, ‘अहिले त सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै छ । तर, समाजले भने गाह्रो बनाउँदोरहेछ ।’
अहिले पनि राधेशकी पत्नीले कसैको फोन उठाउँदिनन् । परिवारमा भएको कोरोनाको विषयमा राधेशले कसैसँग कुरा गर्दा पनि पत्नीले झर्को मान्छिन् । ‘समाजले गर्ने विभेद र संक्रमितलाई सामाजिक सञ्जालदेखि फोनमा गर्ने व्यवहारहरुले मानसिकतामा गहिरो चोट पुग्दोरहेछ’, राधेश भन्छन्, ‘कोरोनाको कुरा गर्‍यो कि इरिटेड हुन्छिन् । उनले कुनै पाप गरेकी त होइनन् तर, संक्रमितलाई अपराध गरेकै अनुभूति गराइँदोरहेछ ।’
स्वास्थ्यकर्मीको परिवार र सचेत भनिएको ठाउँकै बासिन्दालाई त यस्तो गाह्रो छ भने झन सामान्य मानिसहरुलाई कस्तो व्यवहार होला ?
राधेश यसको कल्पनै गर्न सक्दैनन् । कोरोना संक्रमतिहरुमाथि छरछिमेक र समाजले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
Prevरुपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेजमा कोरोना संक्रमितको मृत्यु
Nextजसले पहिलो पटक कोरोना पोजेटिभ गर्भवतीलाई सुत्केरी गराएकी थिइन्, बिहे गर्न नमान्दा यी डाक्टरको हत्या
महात्मा गान्धीको चस्मा ४ करोड ८ लाखमा विक्री भयो
सलाम छ यि नेपाली चिकित्सकलाई, जसले कोरोना लागेकी महिलाको ५ घण्टा लगाएर क्यान्सरको शल्यक्रिया सफल पारे
अस्पतालको चक्कर काट्दाकाट्दै विरामीको मृत्यु
भानुले रामायण नलेखेका भए…
डा. योगिता गौतमको विभत्स हत्या (2949)
भर्खरै जन्मिएको छोरालाई मार्न अमाजुले यस्तो खेल खेलीन् (2859)
दक्षिणकाली मन्दिरमा अप्रत्यासित घटना मन्दिरमा सबै नाग बाहिर निस्के अनिष्टको संकेत (2470)
विवाह गरेको ७ दिनमै विदेशिएका श्रीमानलाई दुवईमा मृत्युदण्डको फैसला, अझै पनि उनको आशमा १७ वर्ष देखि बसेकी छन् धनिषा (1850)
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (1778)
जव सडकमा मास्कको अण्डरवेयर मात्र लगाएर निस्किए पुरुषतस्विर सहित (1774)
असल श्रीमानको खोजीमा यि करोडपति यु’वती ! यसरी स’म्पर्क गर्नुहोस् – (1721)
कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साँढे ३ करोड इनाम दिने घोषणा ! (1701)
गर्लफ्रेण्ड भेट्न सिड्नी गएका नेपालीले गर्लफ्रेण्डकै साथीलाई रक्सी खुवाइ बलात्कार गरेपछि… (1612)
मानव बलि दिए कोरोनाको महामारीबाट मुक्त भईन्छ भन्ने सपनामा दर्शन पाएँ त्यसैले दिएँः पुजारी ओझा (1466)
पशुपति नाथ मन्दिरको दर्शन गरि आज बि•स २०७७ साल कार्तिक ३ गते सोमबारको दैनिक रासिफल हेर्नु्होस्
आजदेखि दशैंको पुर्णिमासम्म लकडाउन गर्ने निर्णय